40Watt 240vac maka ọkụ ọkụ
7W mini na-eduzi ọkwọ ụgbọala 12v
30W 12v 24v dugara ike ọkọnọ
100W ip67 pfc ada akara ọkwọ
60watt EMC 12vdc 24vdc ike ọkọnọ
150w Mankeum ebughibu edu ọkwọ
Volta ọsọ ọsọ: 100-240V
Mmepụta voltaji: 12V / 24V
Mmepụta Ugbu A: 3.34A / 1.67A
Ọnọdụ ọrụ: Volta na-adịgide
Ahụkarị arụmọrụ: 86% ；
Nha: 147 * 43 * 26mm
Asambodo: CE (LVD), EMC, UL, ROHS, IP67
.Dị VD-12040A0695 / VD-24040A0695 VDC-12040A0695 / VDC-24040A0695
Ọsọ ọsọ voltaji 100-240V
Mmepụta voltaji 12V / 24V
Mmepụta Ugbu A 3.34A / 1.67A
Mmepụta Power 40W
Dị ike Volta mgbe niile
Ihe omuma Plastic
Akwụkwọ EC (LVD), UL, ROHS, IP67 EC (LVD), EMC, UL, ROHS, IP67
Ebe siri ike High pụrụ ịdabere na Low price
Nha 147 * 43 * 26mm
Ibu ibu 300g
Ọrụ echedoro Short circuit / N'ime voltaji / N'ime okpomọkụ
Akwụkwọ ikike 3 afọ akwụkwọ ikike
Ahia America / Europe / Australia / Asia
Nkọwapụta zuru ezu
Nọmba nlereanya VD-12040A0695 VD-24040A0695
Mmepụta Volta DC 12V 24V
Gosiri na ugbu a 3.34A 1.67A
Ugbu a 0-3.34A 0-1.67A
Gosiri ike 40W 40W
Ripple na Noise (max.) Rịba ama 4 120mVp-p 240mVp-p
Voltaji ndidi Note3 4% ± 2%
Nhazi usoro ± 1% ± 0,5%
Ibu iwu ± 2% ± 1%
Mmepụta otu 1 1
Tọọ oge Cheta6 2000ms, 50ms (na zuru ibu) 100Vac / 230Vac
Jide oge (pdị.) 15ms (zuru ezu) 100Vac / 230Vac
Ntinye Volta nso Rịba ama 2 90 ~ 264Vac ma ọ bụ 127 ~ 374Vdc
Ogologo oge 47 ~ 63Hz
Ihe na-akpata ike (pdị) PF≥0.55 / 100V (na zuru ibu) PF≥0.45 / 230V (na zuru ibu)
Arụmọrụ (pdị) 84% 86%
AC ugbu a 0.98A / 100Vac 0.5A / 230Vac
Inrush ugbu a (pdị.) Mbido oyi: 55A / 230Vac
Leakage ugbu a <0.75mA / 240Vac
Nchedo N'ime ibu 104% -145% nke ikike mmepụta akara
Nchedo mode: mgbochiume mode, gbakee na-akpaghị aka mgbe ibu belata.
Obere oge Protectiondị nchebe: Ọnọdụ mgbochiume, na-agbake na akpaghị aka mgbe emechara ọnọdụ mmebi
N'ime voltaji 13-18V 24.5-35.0V
Protectiondị nchebe: Ọnọdụ mgbochiume, na-agbake na akpaghị aka mgbe emechara ọnọdụ mmebi
N'ime okpomọkụ Ta: 100 ℃ ± 10 ℃ (RTH2)
Ọnọdụ nchedo: Mechie O / P voltaji, weghachite na-akpaghị aka mgbe okpomọkụ gbadara.
Gburugburu ebe obibi Na-arụ ọrụ okpomọkụ -25 ℃ ~ + 50 ℃
Na-arụ ọrụ iru mmiri 10% ~ 90% RH, na-abụghị condensing
Nchekwa temp. na iru mmiri - 25 ℃ ~ + 75 ℃ ， 5% ~ 95% RH
Temp. ọnụọgụ ± 0.05% / ℃ （0 ~ 40））
Omume ọma jijiji 10-300Hz, 1G 10min./cycle, oge maka 60min. onye ọ bụla tinyere X, Y, Z anyụike
Nchekwa na EMC Safetykpụrụ nchekwa Nkwenye na EN61347-1, EN61347-2-13, Ip67 mmiri na-adịghị mma.
Guzogide voltaji M / PO / P: 3.75KVac
Insolation na-eguzogide M / PO / P: 100Mohms / 500Vdc 25 ℃ / 70% RH
EMC Nwepu /
EMC Mgbaghara /
Ndị ọzọ MTBF ≥200Khrs, MIL-HDBK-217F (25 ℃)
Akụkụ 147X43X26mm (L * W * H)
Mbukota 0.3Kg / PC, 50PCS / 15Kg / igbe, (375X340X175mm)
MARA 1. All parameters B NOTGH spe akpan akpan kwuru na-tụrụ na 230VAC ọsọ ọsọ, gosiri ibu na 25 ℃ nke ihere okpomọkụ.
2. Enwere ike ikwuputa okwu n'okpuru obere ndenye ndenye. Biko lelee akara ngosi anya maka nkọwa ndị ọzọ.
3. Ndidi: na-agụnye melite ndidi, akara ụkpụrụ na ibu ụkpụrụ.
4. Ripple & mkpọtụ tụrụ na 20MHZ nke bandwit site na iji kpara akpa ụzọ-waya kwụsị na a 0.1uf & 47uf yiri capacitor. 5.A na-ewere ike ọkpụrụkpụ dị ka akụrụngwa nke a ga-arụ ọrụ yana ngwa ikpeazụ. Ebe ọ bụ na arụmọrụ EMC ga-eme
ihe nrụnye zuru oke ga - emetụta ya, ndị nrụpụta akụrụngwa ikpeazụ ga-ekwenyeghachi EMC Ntụziaka na nrụnye zuru ezu. 6.A nwalere oge mmalite n'okpuru ọnọdụ nke kpakpando oyi, ịgbanwuo / gbanye na-aga n'ihu nwere ike ibuli oge mmalite.
Nọmba nlereanya VDC-12040A0695 VDC-24040A0695
Arụmọrụ (pdị) 84.5% 86%
N'ime voltaji 13-18V 24.5-35V
Nchekwa na EMC Safetykpụrụ nchekwa Nkwenye na 61347-1, EN61347-2-13, Ip67 mmiri na-adịghị mma.
EMC Nwepu Nnabata na EN55015, EN61000-3-2 klas A, EN61000-3-3, FCC part15 classB
EMC Mgbaghara Nkwenye na EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
Antdị ike ọkọnọ mgbe niile
Ntinye ọsọ ọsọ 100 ~ 240V
Jụrụ site na ikuku ikuku n'efu
Kpamkpam ekpuchitere na IP67 larịị
100% zuru ibu apa ọkụ-na ule
Obere olu, obere ibu na arụmọrụ dị elu
Nchedo maka obere oge, karịa ibu, karịa voltaji na oke okpomọkụ
* Ọkụ ụlọ ọrụ, ọkụ Artwork, Ngosiputa ngosi
* Ọkụ ụlọ
* Ọkụ ọkụ, dị ka ọkụ ala, oriọna ala, ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ, mgbanaka mgbidi, wdg.
* Hotel, Reslọ oriri na ọ lightingụ Resụ ọkụ
* Ọzọ ọkụ ọha
1, factorylọ ọrụ mbụ batara mmiri na-enweghị mmiri ọkụ na China,
Afọ 2,10 lekwasịrị anya na ikanam Power Tụkwasịnụ Research na mmepe, Production;
3, nyere ndị ahịa 2,500 ọrụ, gụnyere 2000 na China, 500 na ahịa mba ofesi n'ụwa niile;
4, ntụkwasị obi dị elu na ezi nkwụsi ike, maka ọtụtụ ụdị ọkụ ọkụ n'èzí n'èzí, site na iji ule sitere n'aka ndị ahịa 2500;
5, Ikanam Power Tụkwasịnụ bụ obi nke Ikanam oriọna na nkesa bụ isi akụrụngwa nke Ikanam Power Tụkwasịnụ. Maka ịchịkwa ogo ahụ, anyị mere onye ntụgharị site na ụlọ ọrụ nke anyị, nke a maka ike ọkọnọ kwụsiri ike ma nwee ntụkwasị obi;
6, Asambodo zuru ezu, UL, SAA, EMC wdg, obere ụlọ ọrụ na-enweghịkarị nke a;
7, Electrolytic capacitors na ihe ndị ọzọ bụ nke nnukwu ika, ngwaahịa dị elu na Ruby wdg.
8, Mgbe-ire na-ekwe nkwa, ezigbo iguzosi ike n'ezi azụmahịa, 1: 1 dochie ihe na-ezighi ezi, ma ọtụtụ obere ụlọ ọrụ na-enweghị isi mgbe ha na-eche nsogbu ahụ, ọbụnadị ihe dị njọ;
9, Usoro nhazi nke ọma, Nweta ike abanye n'ọnụ ụzọ dị ala, mana ime nke ọma abụghị nke ukwuu, emela nke ọma, n'agbanyeghị na otu usoro ahụ, otu ihe ahụ, mee ihe niile anyị abụghị otu, n'ihi na njikwa usoro bụ abụghị otu, Akụrụngwa abụghị otu;
10, Strong r & d otu, r & d otu nwere ihe karịrị mmadụ 30;
11, Mgbanwe na ngwa ngwa nnyefe, nnukwu iwu na-ebutekarị n'ime izu abụọ, General obere ogbe iwu nwere ike ịhazi nnyefe n'ime ụbọchị 3 ma ọ bụrụ na ịnwe ngwaahịa ndị agwụla na ngwaahịa;
12, Tụlee na MeanWell, anyị nwere uru nke ODM, OEM, ogo na-agbanweghi agbanwe ma nwee ọnụ ahịa asọmpi.
Nke gara aga: 15W mere tube ọkwọ ụgbọ ala
Osote: 100Watt ac ka dc ọkwọ mw lpv
24 v ike onunu
24v DC Ntinye ike
24v du ndị ọkwọ ụgbọala
klas 2 duru ike ọkọnọ
Onye ọkwọ ụgbọala 12v 40w
duru ọkwọ ụgbọala 24 volt
duru ọkwọ ụgbọala 40 watt
Onye ọkwọ ụgbọ ala e depụtara
ul depụtara ike ọkọnọ
Waterproof Dugara Driver Ip67
Waterproof Mere Power Tụkwasịnụ
12v 5a 60w ac ka dc ọkwọ mw lpv60w
20w ada warara ìhè ọkọnọ
100Watt ac ka dc ọkwọ mw lpv
30W dugara onye na-anya warara maka ọkụ ngosi ọkụ
15W mere tube ọkwọ ụgbọ ala